ကြော့ရှင်းသောခရမ်းရောင်အရောင်နှင့်ခေတ်မီ chaise ခန်းမဆောင် - ပျင်းရိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သေးလျောက်ပတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့. ခိုင်ခံ့သောသစ်သားခြေသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်. သက်သောင့်သက်သာရှိသောခံစားမှုသည်အိတ်ကပ်နွေ ဦး ပေါက်ကို အသုံးပြု၍ ထိုသို့သောဆိုဖာကိုထိုင်ခုံတွင်တွေ့နိုင်သည် & မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရေမြှုပ်.
Contemporary style fabric homely living room modern chaise lounge sofa. ကြော့ခရမ်းရောင် - ပျင်းရိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သေးလျောက်ပတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့. ခိုင်ခံ့သောသစ်သားခြေသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်. သက်သောင့်သက်သာရှိသောခံစားမှုသည်အိတ်ကပ်နွေ ဦး ပေါက်ကို အသုံးပြု၍ ထိုသို့သောဆိုဖာကိုထိုင်ခုံတွင်တွေ့နိုင်သည် & မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရေမြှုပ်.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; Lounge; အိပ်ခန်းပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: အထည်; Wooden legs; အစိုင်အခဲသစ်သား&အထပ်သား; အမြှုပ်
အသွင်အပြင်: Modern Style
ထုတ်ကုန်အမည်: Modern fabric sofa; Chaise lounge sofa,soda bed
function ကို: Fabric chaise lounge sofa